musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Rail Kufamba » Iyo Napa Valley Waini Chitima inotangazve muna Chivabvu 17
Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
Imwe yeashoma anoshanda enhoroondo yevatyairi njanji muUS, iyo inoyevedza yewaini nyika chiitiko inopemberera kuvhurwa kwayo.
Iyo Napa Valley Waini Chitima inozivisa kuti ichagamuchira vanodzoka zvakare kutanga Muvhuro
Iyo Napa Valley Waini Chitima inoronga kutangazve neimwe yeakakurumbira mafambiro, iyo Legacy Tour
Vaenzi vanokumbirwa kupfeka mamask parwendo rwavo kunze kwekunge ivo vachidya kana kunwa
The Napa Valley Waini Train, chiitiko chinonakidza uye chisingakanganwiki chinoratidzira mazuva ekubwinya kwekufamba kwechitima, anofara kuzivisa kuti ichagamuchira vafambi kudzoka kutanga Muvhuro, Chivabvu 17. Mumwe weavo vashoma vanoshanda vezvitima zvevapfuuri muUS, inoonekwa nyika yewaini ruzivo pemberera kuvhurwa kwayo nekupa ekuremekedza matikiti kuvashandi vehutano veko kuti vavatende nebasa ravo Iyo Napa Valley Waini Chitima yakabatanawo neOLE Health kuitisa kiriniki yekudzivirira kwechinguva pachiteshi chavo chechitima kubva pakati paApril kutsigira kuedza kwenzvimbo kubaya nharaunda.
"Tinodada kupfuura nakare kose kuve chikamu chenharaunda yeNapa Valley mushure mekuona kushinga kwayo mukati medenda uye tichida kuratidza kutenda kwedu kumagamba edu ehutano," akadaro Steven Lampkin, director wenzvimbo yeNoble House Hotels & Resorts. "Tinofara kudzosa zviitiko zvedu zvemhando yepamusoro zvevagari vemo nevashanyi uye tashandisa nzira dzakawanda dzekuchengetedza kupa vafambi rugare rwepfungwa tichinakidzwa nekudyira kwepamusoro-soro kwepasi nepakanaka."
Iyo Napa Valley Waini Chitima inoronga kutangazve neimwe yeakanyanya kufarirwa mafambiro, iyo Legacy Tour. Iyo Nhaka Yekutenderera inotanga nekuravira kwewaini inopenya, ichiteverwa neawa matatu-njanji yekushanya kweanozivikanwa Napa Valley, mana-kosi gourmet yekudya yakarongedzwa neWine Train's nyanzvi yekugadzirira timu, kumira pachiratidzo cheNapa Valley chemufananidzo. mukana uye zvakasarudzika kuravira uye kushanya kuCharles Krug uye V. Sattui. Iyo yakazara yechitima yeini yakazara mutsara kumusoro kwenzendo dzinosanganisira iyo Gourmet Express, Vista Dome, Grgich Hills Winery Tour uye iyo Murder Mystery Tour yakarongerwa kutanga kugamuchira vaenzi pakati paJune. Imwe neimwe nzendo inoita kuti vafambi vafarire zvisingakanganwike zveNapa Valley mizinda mizhinji ine mukurumbira yeminda yemizambiringa uye wineries, sevhisi yakanaka yekudyira uye chikafu chinonaka chemitambo yakawanda uchizorora mukati mechitima chekare chekare.
Iyo Napa Valley Waini Chitima yakagadzira yakachengeteka uye yakachena nharaunda ine matsva ekuchengetedza matanho munzvimbo yenhengo dzechikwata uye vafambi. Chigaro chechitima chechitima chakambomiswa, uye matafura ave nemamita matanhatu akapatsanurwa nezvikamu zvakavakirwa-mukati zvichipatsanura pod imwe neimwe. Pamusoro pezvo, vese vafambi nevashandi vanofanirwa kupfeka mask yekukwira chitima, vashanyi vanokumbirwa kupfeka masiki parwendo rwavo kunze kwekunge ivo vachidya kana kunwa.